बागीका कारण तनावमा अधिकारिक उम्मेद्वार – Satyapati
बागीका कारण तनावमा अधिकारिक उम्मेद्वार
काशीराम शर्मा । ६ पुष २०७४, बिहीबार
बाँके । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बाँकेमा पनि बागी उम्मेदवारको बिगबिगीले गर्दा वास्ताविक उम्मेदवारको टाउको दुखाई बनेको छ । बाँकेमा प्राय हरेक पार्टीबाट बागी उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यहाँसम्मकी बाम गठबन्धन र कांग्रेस–राप्रपा गठबन्धन दुबैबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैतर्फ बागी उम्मेदवारी परेको छ । बाँकेको क्षेत्र नं. १ मा बाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार महेश्वर गहतराजविरुद्ध माओवादी केन्द्रकै सबिर खाँले उम्मेदवारी दिएका छन् । खाँ माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय भेला आयोजक कमिटीका सदस्य हुन् ।
समानुपातिकमा सिफारिस परेका खाँले आफूलाई हटाएको र समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित उम्मेदवार छनौट नगरिएको भन्दै बागी उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । खाँले भने, ‘मेरो मात्र सवाल होईन, यहाँ सिफारिसमै नपरेकालाई (कृष्णा केसी) समेत प्रदेशको टिकट दिइएको छ । मधेशी, मुस्लिमलाई पन्छाईएको छ । नेतृत्वले मनोमानी गरेपछि बागी उम्मेदवारी दिनुपरेको हो ।’ यस्तै माओवादी केन्द्रबाट बामगठबन्धनविरुद्ध अमरबहादुर खड्का र सन्तोष थारुले पनि बागी उम्मेदवारी दिएका छन् । माओवादी केन्द्रको भेला आयोजक कमिटीका सदस्य खाँले बागी उम्मेदवारी दिनेहरुप्रति न्याय नभए आफूहरु उम्मेदवारी फिर्ता लिने पक्षमा नरहेको पनि प्रष्ट पारे ।
‘शनिबारसम्मको समय रहेकोले अझैँपनि सच्चिने ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘सिफारिसमा नपरेकाहरुको उम्मेदवारी फिर्ता र अन्यायमा परेका हामीहरु सबैको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । अन्यथा उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन ।’ अहिले पनि कसैको उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा पार्टीकै चुनाव चिन्हमा लड्न सकिन्छ । पार्टीले बेलैमा उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ । यता अमरबहादुर खड्काले पनि उम्मेदवारी फिर्ता नलिन अड्डी कसेका छन् । प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनाउने आश्वासनपछि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका खड्काको नाम अन्तिम समयमा काटिएपछि उनले बागी उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका हुन् । राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाका अधिकांश नेता कार्यकर्ताको साथ पाएका खड्का अहिले संघीय समाजवादी फोरमलाई मनाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।
फोरमका स्थानीय र केन्द्रीय नेताबाट सघाउने आश्वासन पाएपछि खड्का उत्साहित भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अनुसार नरैनापुर गाउँपालिकामा मात्र संघीय समाजवादी फोरमको ४ हजारभन्दा बढी मत रहेको छ । जसले चुनावी नतिजामा ठूलो अर्थ राख्छ । यता क्षेत्र नं. १ कै प्रतिनिधि सभातर्फ कांग्रेस–राप्रपा गठबन्धनका उम्मेदवार माधबराम खत्रीबिरुद्ध कांग्रेसका कृष्ण कार्कीले उम्मेदवारी दिएका छन् । खत्रीले टिकट पाएपछि क्षेत्र नं. १ मा अत्याधिक विरोध भएको छ । नेपाली कांग्रेस कोहलपुरका नगर सभापति बलराम शर्मा तथा गनापुरका दुखीराम लोनियाले त असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाटै राजीनामा दिएका छन् । क्षेत्र नं. १ मा हालसम्मका निर्वाचनको विश्लेषण गर्दा कोहलपुर क्षेत्र निर्णायक मानिन्छ ।
एकातिर बागी उम्मेदवार र अर्को्तिर संगठनकै जिम्मेदवार सदस्यको राजीनामापछि खत्री पनि तनाबमा छन् । २०४४ सालदेखि नेपाल बिद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा थालेका कार्कीको उम्मेदवारी खत्रीका लागि भारी हुने भएको छ । कार्कीले आफ्नो उम्मेदवारी लोकतान्त्रिक पद्दति र दृष्टिकोणमा विश्वास गर्नेहरुको समर्थनमा आएको भन्दै जीत सुनिश्चित भएको दाबी पनि गरे । टेलिफोन सम्पर्कमा आक्रोशित आवाजमाा कार्कीले भने, ‘नेपाली कांग्रेसबाट सिफारिस भएका खत्री विश्वासघाती र विगतमा कांग्रेसलाई हराएका व्यक्ति हुन् । उनलाई रुख चुनाब चिन्ह लिएर भोट माग्ने नैतिक अधिकार छैन । मेरो आत्मसम्मान र दृष्टिकोण सही ठह¥याएका कांग्रेसका थुप्रै साथीहरु आफुसँगै रहेका छन् ।’ उनले केन्द्रीय नेतृत्वको स्वैच्छाचारी निर्णय विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी संघर्ष र आन्दोलन भएको पनि बताए ।
यता नेपाली कांग्रेसका सचिव कपील शर्माले कार्कीलाई मनाउने प्रयास भईरहेको बताएका छन् । कार्कीसँग नियमित सम्पर्क र छलफल भईरहेको शर्माले बताईरहँदा कार्की भने चुनाव लड्ने नै मनस्थितिमा छन् । बाँकेको क्षेत्र नं. २ मा पनि बागी उम्मेदवारीका कारण केही दलगत उम्मेदवारहरु तनाबमा छन् । कांग्रेसका ध्रुब दाहालले प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिँदा कांग्रेस गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका ओम प्रकास आजादलाई केही असहज भएको छ । तर जहाँ पनि पद खोज्ने दाहाललाई पार्टीका नेता कार्यकर्ताले हल्का रुपमा लिएको हुँदा उनको बागी उम्मेदवारीले खासै अर्थ नराख्ने कांग्रेसजनको बुझाई छ । वडा नं. २ का सदस्य रहेका दाहालले यसअघि जिल्ला समन्वय समितिको उपसभापति पद ताकेका थिए । त्यहाँ पनि बागी उम्मेदवारी दिईसकेको दाहाल पछि भने ब्याक भए ।
‘दाहाल जीको यो बार्गेनिङ मात्र हो, प्रतिनिधि सभामा दाबी गर्ने दाहालले यसअघि नै वडाको सदस्यमा निर्वाचन लडेर आफ्नो हैसियत देखाइसक्नु भएको छ । उनले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएर सुखै छैन,’ नेपाली कांग्रेसका एक जना नेताले भने । यता बाम गठबन्धनका उम्मेदवार पशुपतिदयाल मिश्रविरुद्ध एमालेकै शिव डोटेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । डोटेलले मिश्रका विरुद्धमा सशक्त दबाब सृजना गरेका छन् । सैद्धान्तिक र वैचारिक दृष्टिकोण भएका एमालेको एउटा ठूलो हिस्साले डोटेललाई समर्थन गरिरहेको छ । डोटेलसँग उनको उम्मेदवारीको बारेमा बुझ्न खोज्दा उनले भने, ‘यो चुनाव संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो हो ।’ यो बेलामा हिंजो संविधान जलाउने, नाकामा बसेर नेपालीलाई नै ढुगा हान्ने अनि साम्प्रदायिकता भड्काउने मिश्रलाई कसरी एउटा स्वाभिमानी नेपालीले भोट हाल्न सक्छ ?’ संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता सुशील कोइरालाको क्षेत्रमा संविधानको विरोध गर्नेहरुलाई मत हाल्नु भनेको कोइरालाकै अपमान गर्नु भएको पनि डोटेलले बताए ।
माओवादी केन्द्रका मुगबहादुर शाहले पनि क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी वडा नं. १३ को वडाअध्यक्षमा पराजित उम्मेदवार हुन् । तर उनको उम्मेदवारीले पनि हजार मतसम्म तलमाथि हुन सक्ने आँकलन गर्दै एमाले–माओवादी गठबन्धनले उनलाई उम्मेदवारी फिर्ता गराउन प्रयास गरिरहेको छ । उनका समर्थकहरु भने अब ब्याक हुन नहुने अडानमा छन् । मिश्रले संविधानविरोधी क्रियाकलाप गरेको र विगतमा मधेसी–पहाडी समुदायलाई विभाजित गर्न भूमिका खेलेको भन्दै त्यसको विरोधमा शाहले उम्मेदवारी दिएका हुन् । एमालेबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा नं. १ को सदस्य रहेको अब्दुल हकिम हल्वाईले पनि क्षेत्र नं. २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । क्षेत्र नं. ३ को प्रदेश ‘ख’ मा बाम गठबन्धनका उम्मेदवार एमालेका बाबुराम गौतमविरुद्ध माओवादी केन्द्रका विजय कुमार पाठकले उम्मेदवारी दिएका छन् । पाठकको परसपुर र जानकी गाउँपालिका क्षेत्रमा राम्रो पकड रहेको छ ।
भोलिदेखि दोस्रो चरणको खोप लगाउन सुरु गरिने, प्राथमिकतामा को–को ?
मेडिकल कलेजको लाहपर्वाही, सडकमा पानी, स्थानीयलाई समस्या
ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै गए ‘स्मार्ट लकडाउन’